Ungazilungisa njani iingxaki zesandi ku-Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Ubuntu 18.04 yinguqulelo yamva nje ye-Ubuntu LTS kwaye mhlawumbi lolona hlobo luhambelanayo nolunamandla kuzo zonke iinguqulelo ze-Ubuntu. Kodwa ngaphandle koku, kuhlala kukho iingxaki ezithile ngeendlela ezithile zekhompyuter okanye ngolungelelwaniso oluthile.
Emva koko siza kuchaza uthotho lwamanyathelo oza kuwathatha xa unengxaki yesandi. Umcimbi oqhelekileyo kwihlabathi le-Gnu / Linux kodwa kulula ukusombulula.Nangona kubonakala kucacile, inyathelo lokuqala ekufuneka silithathile kukujonga ubumbeko lwekhadi lesandi. Ngale nto siza kuyenza Inkqubo kunye neeSetingi zesandi Sijonge ukuba yeyiphi na into ephawulwe njenge "Imveliso" kwaye yeyiphi ephawulwe "njengegalelo."
Uyenza njani i-Ubuntu 16.10 i-USB ekhawulezayo ngokukhawuleza nangokulula
Enye yeengxaki eziqhelekileyo kukuba Iziphumo, isokisi ye-hdmi iphawulwe kwaye asifuni ukuyisebenzisa. Ukukhetha ikhadi lesandi kuya kwanela ukusombulula le ngxaki. Kukho ezinye iingxaki kwaye ngale menyu yemizobo asinakuyenza. Ukwenza oku, sivula i-terminal kwaye senze oku kulandelayo:
Emveni kwalonto ulawulo lomlawuli weAlsa okhupha isandi luya kuvela. Ngokucinezela F6 singalitshintsha ikhadi lemizobo elingagqibekanga, oku kungasombulula iingxaki ezininzi zesandi, kodwa nangona kunjalo, kukho iimeko ezingasonjululwanga ngolu hlobo. Kule meko, emva kwako konke oku kungentla kwaye ungasebenzi, ekuphela kwento eseleyo kukuqala ngokutsha okanye ukufaka kwakhona iAlsa kunye nePulseAudio. Ukwenza oku, senza le miyalelo ilandelayo kwisiphelo sendlela:
Kwaye oku kuyakuqala kwakhona inkonzo kwaye ngokwenza le miyalelo ilandelayo siya kubuyisela iAlsa kunye nePulseAudio:
Ukuba emva kokwenza ngalinye lala manyathelo kunye nangona kunjalo siqhubeka nokuba neengxaki zesandi, kuya kufuneka sijonge isiziba esithile okanye kwimeko embi, tshintsha ukuhanjiswa okanye ikhadi lesandi. Ziziimeko ezigabadeleyo ezihlala zichaphazela iimeko ezimbalwa okanye ngezixhobo ezithile. Ngaphandle koko, naziphi na iindlela zangaphambili ziya kusinceda ukusombulula naziphi na iingxaki zesandi esinazo ngo-Ubuntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ungazilungisa njani iingxaki zesandi ku-Ubuntu 18.04
UVladi Aoki sitsho
Ndizamile lo myalelo kwaye yintoni eyenzileyo kukonakalisa inkqubo yam yokusebenza kwi-Mint, andikukhuthazi ukuyisebenzisa.
Phendula uVladi Aoki
UDaniel Soria sitsho
Molo, ndimtsha kweli hlabathi, ngaphambi kokuba ndibene-linux mint, kwaye ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame ukubuntu 18.04 ngenxa yeengxaki zokucotha kwisikhangeli, nangona oko kuqhubeka ngokufanayo, ingxaki kukuba ayivelisi nasiphi na isandi endinaso ilandele amanyathelo kwileta kwaye ayisebenzi, xa ungena kwi-alsamixer kwaye ucinezela i-f6, iyaphuma-ngokungagqibekanga
- faka igama
Ndine-acer travelmate 2490, ndiyazi ukuba indala kakhulu kodwa andinayo enye into… .. hahahaha, andazi ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya okanye ukuba kufuneka ndinxibelelane phi
Phendula kuDaniel Soria
Esi sisombululo asikhange sisebenze kum kwi-PC Notebook exo cloud E15 .. kufana nekhadi lesandi elindamkelayo, lindivumela ukuba ndijike ndinyuse ivolumu phezulu kodwa andiyiva ngezipikha okanye ii-headphone.
Abaqhubi kwiifestile zizixhobo ze-Intel SST Audio (WDM) kunye ne-ES8316AudCodec Icebo kodwa andifumani ndlela yokufaka kunye / okanye yokubenza basebenze ku-Ubuntu 18.04.1 LTS
Molo, ndifakele Ubuntu 18.04.1 LTS ngokugqibeleleyo kwaye isandi sisebenza kakuhle. Faka iinkqubo eziqhelekileyo kwaye yonke into isebenze kakuhle. Ndicime nje ngesiqhelo ngengomso, ndalayita isithethi sabe singaveli kwidesika. Akukho sandi kwaye akukho lutshintsho kulungiso. Ndenze into oyicebisayo kodwa ayisebenzi. Ndinekhadi lesandi elidityanisiweyo eliliqonda njengeRealtek ALC887-VD. Umama wam yiMSI H97 PCMate. Ndiza kuhlala ndijonga ukubona ukuba ndifumana ntoni.
UJoaquin Sanchez Morejon sitsho
Othandekayo u-Ignacio Lopez, ndifana nawe.Faka ubuntu 18.04 kwi-acer chromebook 15 CB3-532. Kwaye andinakufumana sandi, bendiphanda kwaye ndivavanya iintsuku kwaye akukho nto, ndicela undincede, ubhalele i-imeyile yam, ndihlala eCuba kwaye apha i-intanethi ayilulanga kwaphela, enkosi kwangaphambili, ngokuba nale bhlog kunye noluntu lwe-linux ukunceda wonke umntu aphucule isoftware yasimahla. ngaphandle kweJoaquin, eCuba.
Phendula Joaquin Sanchez Morejon
Kwenzeka into efanayo kum, into endiyisebenzeleyo yayikukukhupha i-pulseaudio kwi-Ubuntu 18.04.2 kunye ne-voila, isandi sabuya
george boiler sitsho
i-tader elungileyo ndinayo i-chromebook asus c200 kunye ne-mount ubuntu 18.14.1 kwaye ndisebenzisa yonke into oyithethileyo kwaye akukho nto nceda uzame ukufaka i-chtmax98090 kwinkqubo enkosi
Phendula kwi-caldera caldera
URicardo Fernandez sitsho
Ndineengxaki zesandi, ngaphandle kokufumana isisombululo emva kweeyure zokukhangela i-intanethi kunye nokuzama izisombululo ezinokubakho.
Ndiza kwisigqibo sokuba yingxaki engenakusombululeka kwaye kufuneka ndizame enye i-distro, engasekelwanga ku-Ubuntu.
Phendula uRicardo Fernández
Molo, esona sisombululo sisiso kunye nesona sikhawulezayo kukuphinda uqhagamshele kwakhona i-HDMI okanye enye kwaye emva koko uye kuseto lweNkqubo kwaye kwisandi ubeke isixhobo ofuna ukusidlala kwaye siphawulwe ku "Iziphumo". Oku kuyandisebenzela kwiLinux Mint 19
Sithandwa, isisombululo sakho sandinceda kakhulu! Enkosi!
I-OSMEL DF sitsho
Mholo. Ukuntywila kakhulu kule pc, kwaye isisombululo yayikukuba, hahahaha, Enkosi zihlobo. Isombulule isandi, ithini into ka-alsa, phinda ufake, faka, khipha, enkosi.
Phendula kwi-OSMEL DF
Endaweni yokuba iposti ibenze. Ukuba awufuni kuchitha ixesha, ungayihoyi le post.
Sinose Mecallo sitsho
"Enkosi" ngokundibuyisela kwisistim kwakhona. Ukuba awufuni ukuyisonga ngokupheleleyo, ungabhali nantoni na ebonisa iposti kwisiphelo sendlela. Umntu onolwazi kufuneka acofe i-bungling ebhalwa ngabantu kule bhlog, ithiyori, ngeenjongo ezintle.
Phendula uSinosé Mecallo
ULuis Manuel sitsho
pulseaudio: Kuxhomekeka: libpulse0 (= 1: 4.0-0ubuntu11) kodwa 1: 4.0-0ubuntu11.1 izakufakwa
Cebisa: pulseaudio-module-x11 kodwa ayizukufaka
Cebisa: gstreamer0.10-pulseaudio kodwa ayizukufaka
Cebisa: pulseaudio-utils kodwa ayizukufaka
E: Iingxaki azinakulungiswa, ugcine iipakeji ezaphukileyo .... ndiyifumana emva kokwenza yonke into eboniswe apha ngasentla .. ndingenza ntoni ukusombulula ingxaki ??? Enkosi
Phendula uLuis Manuel
Luis @ Luis-B: ~ $ sudo alsa amandla-kwakhona
[sudo] iphasiwedi ye-luis:
Ukupheliswa kweenkqubo: 4557.
Ukothula i-ALSA iimodyuli zomqhubi wesandi: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-codec-nge snd-hda-codec-generic snd-hda-intel snd-hda-controller snd-hda-codec snd-hwdep snd-pcm snd- seq-midi snd-seq-midi-umcimbi snd-rawmidi snd-seq snd-seq-isixhobo snd-timer (ayiphumelelanga: iimodyuli zisalayishiwe: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-codec-nge snd-hda-codec -ijwayelekile snd-hda-codec snd-hwdep snd-pcm snd-timer).
Ukulayisha iimodyuli zomqhubi zesandi ze-ALSA: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-codec-nge snd-hda-codec-generic snd-hda-intel snd-hda-controller snd-hda-codec snd-hwdep snd-pcm snd- seq-midi snd-seq-midi-umsitho snd-rawmidi snd-seq snd-seq-isixhobo snd-timer.
Luis @ Luis-B: ~ $ sudo apt-susa -purge alsa-base pulseaudio
Iphakheji 'pulseaudio' ayifakwanga, ke ayisuswanga
Iiphakheji ezidweliswe ngezantsi zifakwe ngokuzenzekelayo kwaye azisafuneki.
uguquko-lwedatha-iseva-eqhelekileyo libcamel-1.2-45 libebackend-1.2-7
zeitgeist zeitgeist-isiseko zeitgeist-datahub
Sebenzisa 'ukufumana i-autoremove' ukuze ususe.
Ezi phakheji zilandelayo ZIYA KUSUSWA:
0 ihlaziyiwe, i-0 iya kufakwa, i-1 isuswe, kwaye i-0 ayihlaziywa.
I-514 kB iya kukhutshwa emva kwalo msebenzi.
unqwenela ukuqhubeka? [Y / n] ewe
(Kufundwa isiseko sedatha… Iifayile ezili-174024 okanye izikhombisi ezikhoyo ngoku.
Ikhipha isiseko se-alsa-base (1.0.25 + dfsg-0ubuntu4)…
Ukucoca iifayile zokumisela i-alsa-base (1.0.25 + dfsg-0ubuntu4) ...
Luis @ Luis-B: ~ $ sudo apt-fumana ukufaka i-alsa-base pulseaudio
ayizinzanga, yokuba ezinye iipakeji eziyimfuneko azenzelwanga okanye azinazo
ikhutshiwe ngaphandle kokungenayo.
Nantsi inkqubo yonke… Enkosi
Molo ulungile, ingxaki yam kukuba ekuphela kwento andimameliyo kukuya kwi-intanethi, umculo odlalwa ngumdlali uviwe kakuhle kodwa ayivakali iYouTube okanye nantoni na kwisikhangeli.Ukuba umntu unokundinceda ndingavuya,
Ngelixa udlala into kwi-intanethi, yiya kuseto lweaudio kwaye ujonge icandelo elithetha into enje ngezicelo zokuba ukhethe isikhangeli kwaye uxelele ukuba isandi sokukhupha kufuneka sivela Andazi ii-headphone zakho okanye izithethi zakho. .., ukuba alikho Icandelo lezicelo liza, khangela ukhetho oluthi "sebenzisa njengokungagqibekanga" kwaye lubonise isixhobo esivelisayo osifunayo, andinakukunceda ngakumbi ngaphandle kokwazi ukuba loluphi ulwabiwo okanye imeko ye desktop oyisebenzisayo.
Enkosi! Sele ndintofontofo sele ingowokuqala!
Kuya kufuneka uyenze lula
Nokuba zithini ezi "zifumanisayo" ukuba uzithathele ingqalelo kangangoko kunokwenzeka kukuba kufuneka ufake kwakhona, isandi siyintlekele kwiLinux, kodwa ukusukela nanini, hayi ngoku
Bakhulule nje i-LTS, iBionic, kwaye inemicimbi efanayo yesandi njenge-ubuntu 8
Yiyo le nto uyiyo, kuya kufuneka uzonwabise. okanye ubuyele kwiifestile
Sele ndiziyekile emsebenzini, kufuneka ndiphinde ndiqwalasele kwakhona ngalo lonke ixesha ndivula inkqubo, (ungacinga nje ngendlela endihlekisa ngayo,) isikhangeli siphelelwa sisandi ngalo lonke ixesha, (qala kwakhona kwaye uthandaze ezulwini) kwaye, Usuku endinemali ngalo, ndiza kuthenga iMac
Sukuba nexhala, kodwa jonga umbono, ukuba uhamba ngemoto, sukukhalaza ngevumba lehashe.
Into endikhalaza ngayo yile plethora yeenjineli ezikhohlisa abantu
Kwaye qhubeka, akukho nto inokundonwabisa ngakumbi ukuba ndinokuyenza ngeLinux endiyenzayo ngeWindows, nokuba iyafana !!!!!
kwinyanga ephelileyo ndifake i-mint kunye nobuntu,… kahlanu !!!! ewe, ekugqibeleni kuyinto eqhelekileyo, (emva kweminyaka elishumi, ndihlala ndiyifumana ukuba isebenze, kwaye ukuba andiyi kuqala kwakhona, kwaye ukuba andiyibuyisi, (loluphi uncedo)
kodwa bendizama ukwenza into efanayo nale ndiyenzayo windows nge stereotools, voicemeeter potato, ((Qaphela ukuba i-tb isimahla) okwangoku ndinenyanga enesiqingatha nokufakwa ezintlanu kwaye andiphumelelanga
Kwaye oko, ngotshintsho ndiyifumene, -Kokugqibela !!!! -, Echaza ngakumbi okanye ngokungaqondakaliyo, nangona zikhona nezinye iincukuthu, kufuneka wenze ntoni kwaye ufake
Umzekelo wentlekele yile: Ndifaka iMint, kwaye ndiyifaka kuba kucetyiswa mna ngumbhali wezifundo, (JoseGDF) emva kokufaka i-distro, ukuhlaziya, i-KXStudio zokugcina, iinkqubo….
Iiplagi zethole azisebenzi, akukho ndlela
Ewe ezinye iiyure ezimbalwa kugoogle zikhangela ummangaliso, ... kwaye akukho nto, khipha
kwaye uqale ngokutsha
ngobuninzi be-19, sele ibekiwe. Ewe, amathole asebenza, oko kukuthi, avule, kodwa ... i-distro yayingenasandi ... de ikhutshwe
Phinda ufake ubuntum ngeli xesha le-188, ke kuya kuba ngcono, kuzinze. kwaye abo bacinga ukuba kutheni ungafaki i-Ubuntu studio ngqo, sele ndiyenzile, khange isebenze
kwaye eli liqhosha elincinci. Ke ukuba uya kwi-linux, uyazi, uzifumanele isihlalo esihle sokuchitha iiyure ze-looooong kuGoogle, ixesha elininzi, ... hayi kwaphela
Ndisebenzisa Kubuntu 18.04 LTS.
Into endiyenzileyo kukutshintsha kuphela iprofayile yeaudio
Le yayiyeyona ngcaciso ichanekileyo kuzo zonke awazifundayo:
tshintsha iProfayili yoPhuculo lwenkqubela phambili
I-PS: Ndicebisa uRicardo Fernández ukuba atshintshele kwiWindows kwaye awuzukuphinda uyichukumise inkqubo yakho yokusebenza, abanye bethu baya kuqhubeka nokufunda amandla amakhulu esoftware yasimahla.
Ukuba umntu uphulukene nesithethi se KDE kwinkqubo, ungakhathazeki:
1- Sudo apt ukufaka iplasma-pa
I-2- sudo yokuqalisa kwakhona
Molo kum kwi-notebook ye-hp-stream, ene-ubuntu 18.04. Ikhompyuter yentombi yam, okokuqala ngeewindows 8 de intombi yam yadinwa kukufana nofudo oluncinci. Isebenze neLinux Mint ngokuchanekileyo okwethutyana kwaye kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndafaka ubuntu 18.04. Khange ndiyiqwalasele iaudiyo kodwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo saya kudlala imovie kwaye iaudiyo yavakala ngathi yaphukile. Ndijonge iifayile zomculo ngokufanayo. Ndilandele amanyathelo kule post ukusuka apho ithi chwetheza kwisiphelo sendlela:
I-sudo alsa yokunyanzeliswa kwakhona
Sele isombulule ingxaki kum. Ngoku isandi sivakala silungile. Ke enkosi!
Isisombululo kumcimbi wokumamela ku-Ubuntu 18.04 kukufaka:
Sudo apt-fumana ukufaka i-pavucontrol. Oku emva kokuzama zonke iingcebiso zangaphambili.
Ngapha koko, enkosi kakhulu.
Ngale nto unokukhetha ikhadi kwaye ujonge indibaniselwano yoqwalaselo lwe- «Ukulawula ivolumu eya kuthi ngoku ivele kwiZixhobo zokubonisa okanye isebenze kwiTheminali« pavucontrol »ngaphandle kwezicatshulwa.
Uxolo uMthombo ngu: https://itsfoss.com/how-to-fix-no-sound-through-hdmi-in-external-monitor-in-ubuntu/
Isebenzile kum !!! uza kuya ezulwini !!!!
Mholo. NdineLubuntu 18.04 LTS. Isandi silungile kum. Ukusetyenziswa kweaudiyo nevidiyo, intanethi, konke kulungile. Inye kuphela into yokuba ayizivelisi izandi zenkqubo, njengaxa uhlisa okanye unyusa ivolumu, ungabinanto yenkunkuma, njl.
Ukuba umntu unesisombululo, siyabulela!
URoberto Alex sitsho
# sudo apt-susa ukungcangcazela
# Sudo ucimile ngoku -r
Kuya kufuneka ilungise ingxaki ngokusisigxina, ukuba onke amanyathelo achazwe apha ngentla asilele. Imibuliso evela eSantiago de Chile.
Phendula URoberto Alex
Kwimeko yam yandisebenzela ngokungasikhupheli isicelo seKODI, isidlali semultimedia. Yikhuphe, qala kabusha inkonzo yeaudio, qala ikhompyuter yakho kunye ne-voila!
UFernando Scavia sitsho
Isebenze kakuhle kwiLubuntu 20.04, ndiyiphucule ukusuka kwikhonsoli kwaye yasusa isandi. Isifundo esihle kakhulu ukulungisa.
Phendula uFernando Scavia
Isithethi khange sisebenzele mna kunye nemiyalelo yakho, icacile, isombulule ingxaki kum.
Andazi inkqubo kwaye nditshintshele ku-Ubuntu, kwiWindows, kutshanje.
Andikwazi ukufumana i-Asus EEE PC Seashell yam ukuba ikhuphe nasiphi na isandi, ndine-Ubuntu 18.04 LTS Mate efakiweyo
Inye kuphela into ephumayo eyivulwayo
Ndizamile kwaye ngokwenene ... ngoku akukho nto inxulumene nomsebenzi weaudio.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingalifumana njani ilizwe kwakhona phambi kokuba imiyalelo ethunyelwe eposini?
Ubuntu bonakele kum, icandelo loCwangciso lilahlekile.
Kuye kwafuneka ndibuyisele iphaneli yokumisela:
Iziko lokulawula i-gnome
Umyalelo 'wegnome-control-center' akafumaneki, kodwa unokufakwa kunye:
I-sudo ifake ukufaka i-gnome-control-center
Ke ndiyifakile ndisebenzisa:
UAlexander Espinosa sitsho
Molweni, injani yonke into, ndiyenzile yonke into oyicacisayo kodwa akukho nto yenzekayo, imakrofoni ye-pc ayiviwa, kwaye okokuqala izithethi ezibini ziviwe, ngoku inye kuphela eviweyo. Ngaba ungandixhasa kule nto? Ndiyamthanda Ubuntu kwaye andifuni ukubuyela kwiWindows, endiyothusayo. Kodwa ngale nkqubo inje kunzima kum ukuba ndisebenze. Ndinike isandla
Phendula ku-Alexander Espinosa